Warmly Welcome: ရှမ်းမုန့်တီ ခေါက်ဆေန့်
အတော်စားကောင်းမှာပဲနော် ... ကျေးဇူးရှင့် :)
စားကောင်းမှာပဲ ရှမ်းစာဆို အကုန်ကြိုက် :)
:::မြို့ပေါ်က လူတွေက တောင်ပေါ်သားတွေလောက် ဧည့်ဝတ်မကျေတာတော့ အမှန်ပဲဗျာ၊:::
တောင်ကြီးကလို ခေါက်ဆွဲဖက် က ဒီဘက်မှာ သိပ်ရှိဘုူးဗျ၊ ကိုဝင်းဇော်ကြီး ခေါက်ဆွဲစားတာကို မြင်ယောင်ပီး ကျွန်တော်တောင် တောင်ကြီးကို သတိရလာ၏၊ :)
စမ်းချက်ကြည့်မယ်..ဒါပေမယ့် လက်ပံပွင့်ခြောက် ရှိဘူးရှင့်..
ကိုကြီး မဟုတ်တော့ဘူးနော် တမင်များ လူကို သတိရနေအောင် လုပ်နေသလားဗျာ စိတ်ဆိုးတယ် ဖတ်ပြီး မစားရတဲ့ ဘ၀တွေ ကျေနပ်ဘူး ပုံတွေပါတင်
သရေယိုအောင် လုပ်ပြန်ပြီ။ :( နေနှင့်ဦးပေါ့။ ချက်စားပလိုက်ဦးမယ်။ မကြာခင် အိမ်မှာ ကြက်သားချဉ် ( ၀က်သားချဉ် ဟုတ်ဘူးနော် )ကျွေးမယ်။ လာစားလှည့်.
လုပ်ပြန်ပြီ ကိုဝင်းဇော်တို့ အစားအသောက်တွေပဲ ချက်စားနေတာလားဟင် ခေါက်ဆေန့်တစ်ပွဲလောက် ဒီကိုပို့ပေးလိုက်ပါ ကြက်သားနဲ့ပဲနော် စားဖူးချင်လို့
ကိုယ်တိုင်လဲ ချက်တတ်တယ် ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော် မဆိုးဘူး ကိုဝင်းဇော်နဲ့ ခင်ရတာ အစားပါ စားရမယ့်ကိန်းပဲ၊ ချက်ကျွေးရမှာနော်
အံမယ် အံမယ် ရှမ်းစကားကို ထမင်းစား ရေသောက်လောက်တော့ ရပါတယ်ဟ။ မနေ့က နင်ရေးတင် မယ်ထင်နေတာ ကျေးဇူး ... ငါချက်တာ မဟုတ်ဘူး အဟီး အမေချက်တာ။
စားစရာတွေပဲ ရေးပြီး တကယ်မကျွေးလို့ကတော့ အိပ်မက်ထဲအထိ ဓားမနဲ့ လာခုတ်မဗျာ. ရှမ်းမုန့်တီတော့ သိတယ် ရှမ်းလို မခေါ်တတ်ဘူးရယ်
ကိုဝင်းဇော်ရမဲ့ မိန်းမကတော့ ကံကောင်းပြီသာမှတ်၊ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကိုဝင်းဇော်ကပဲ ချက်ကျွေးနေရမှာလေ .. ဒါနဲ့ နောက်မီနူးက ဘာတဲ့လဲ။။။
ကိုဝင်းဇော်ကြီးတော့ တစ်မျိုးပြီး တစ်မျိုးပါလား။
သံပုရာသီးနံ့နဲ့ နံနံပင် အနံ့ကို နေနေလဲ ကြိုက်တယ်။ မုန့်ဟင်းခါးစားရင် အဲဒီ ၂ မျိုးမပါရင် အရသာပေါ့နေသလို မျိုးပဲ။ စားချင်အောင်ပဲ ရေးနေတယ်။
စားသွားပြန်ပီ တစ်ဇလုံ ... ရှက်လည်း မရှက်တတ်ဘူး။
ရှမ်းအစားအစာတွေကိုအကုန်လုံးကြိုက်တာနော်။ ဖတ်ရင်းသားရေကျလာလို့ ပြန်ပြီ။ ရှမ်းမုန့်တီတော့ မစားဖူးသေးဘူး။ ချက်စားဖြစ်ရင် လက်တို့ခေါ်နော်း))
အော်... ကိုဝင်းဇော်ကတော့ စားချင်တာတွေ စားပြီး လျှောက်လည်နေရတော့ ပြောအားရှိတာပေ့ါနော်။ နေ့တိုင်း တောင်ကြီးမှာ ကြိုက်တာ လိုက်စားနေတာ မနာလိုချင်တော့ဘူး။း)
ဒီမှာ အဲဒါတွေဝယ်လို့ ရပါမလားမသိဘူး။ လုပ်စားချင်လာပြီ။
ချက်နည်းက..လွယ်လွယ်လေးလိုပဲနောဗျ...။ ကျန်တာတွေ တော့ရနိုင်မယ်..ဒီမှာလေ...၊ လက်ပံပွင့်ခြောက်တော့ မရဘူးထင်တယ်...။ ဘာနဲ့ အစားထိုးလို့ရနိုင်မလဲဟင်..။ အိမ်မှာ အတူနေတဲ့ ရှမ်းညီလေးတစ်ယောက်ကို ချက်ကျွေးချင်လို့...။
မစားဖူးဘူးဗျ ရေးထားတာ ကောင်းလွန်းတော့ စာချင်မိတယ်။ ရန်ကုန်မှာ အဲဒါ ရနိင်လား ။
ရှမ်းပြည်သွားလည်ဖူးပေမယ့် မစားခဲ့ရဘူး ။
ချက်နည်းတင်မဟုတ်ဘူး စားနည်ပါဖော်ပြ ထားတဲ့ စေတနာကို မြင်မိပါရဲ့ဗျာ ။
ဆစ်ဒနီက ရှမ်းတွေက ရှမ်းမုန့်တီ မခေါ်ဘူး၊ ရှမ်းခေါက်ဆွဲလို့ခေါ်တယ်။ ပဲပုပ်ကို ကြိုက်ပေမဲ့ ရှမ်းခေါက်ဆွဲကို သူတို့က ကြက်သားနဲ့ပဲ လုပ်လို့ တခါမှ မစားဖြစ်ဘူး။ ဘုန်းကြီးကျောင်း ဈေးရောင်းပွဲတွေမှာ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ အမြဲရောင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၀က်သားနဲ့ ချက်တာ တခါမှ မတွေ့ဖူးဘူး။
"ဘာပဲ စားဖြစ်စားဖြစ် အွန်လိုင်းပေါ်က ဘလောဂ့်ဘော်ဒါတွေကို ဦးဆုံးအရင် သတိရပါတယ်..." ဆိုတဲ့ စာကြောင်းလေး တကြောင်းနဲ့တင် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ စိတ် စေတနာလေးကို တွေ့လိုက်ရလို့ မစားရပေမယ့် ဝသွားပါတယ်...
နားနားပြီးစား၊ စားစားပြီး ချွဲမနေနဲ့၊ အစားပုတ်ကိုဝင်းဇော်ကြီး ..
ထမင်းလိုက်ပွဲပြင်တဲ့ ဇလုံနဲ့တဲ့လား ဘယ်လိုများ စားတယ်မသိပါဘူး။ ဒါကိုပဲ သူတကာသိအောင် လုပ်နေတယ်၊ ရှက်လဲ မရှက်ဘူး၊
သူများသွားရည်ယိုအောင်ပဲ လုပ်နေတာ။ ချက်စားကြည့်ချင် တယ်။
ငါတော့ နေမကောင်းဖြစ်ချင်ရင် ငရုတ်သီးစပ်စပ်နဲ့ တွယ်ပစ်လိုက်တာ။ အမှတ်ရတယ်......
ဒါဆို တစ်အိမ်တက် တစ်အိမ်ဆင်း လည်နေတယ် ဆိုပါတော့၊ စိတ်ချမ်းသာနေတာမြင်ရလို့
ညီမတို့ အင်းထဲက မုန့်တီလုပ်နည်းနဲ့ခပ်ဆင်ဆင်ပါပဲ။ ငါးနဲ့ပဲချက်စားကြတာများတယ်။ ငါးရှဉ့်နဲ့ဆို ပိုလို့ အရသာရှိတယ်။
စားပါ စားပါ တစ်ယောက်ထဲစားပါ ..
ဘာစားစား လိုက်ပွဲနဲ့မှ စားတာဗျ.
မိန်းမယူရင်တောင် ခယ်---- ပါမှ စိတ်တိုင်းကျတာ
လုပ်ပြန်ပြီဗျာ ကိုဝင်းဇော်က ....
ကို ၀င်းဇော်ချက်ကျွေးရင်တော့ စားမယ်ဗျာ...
ဂန်လေး တော်တယ် .. သူတကာအိမ် လည်စားနေတာပေါ့။ ငါ့ဆီတော့ မရောက်ဘူးပဲ။
တောင်ကြီးကို လွမ်းလာပြီ ကိုဝင်းဇော် ကြွားလုံးထုတ်နေတာနဲ့ .. လိုက်ပွဲမစားဘူးဆိုရင် ဆိုင်မှာ လိုက်ဝယ်ကျွေးပါမယ်။
အစ်ကိုရေ..ရှမ်းကိုချစ်ရင် ပဲပုပ်ကိုလည်း ချစ်ရတယ်တဲ့ဗျ..... ကျွန်တော်ကတော့ တောင်ပေါ်သားဆိုတော့ တောင်ပေါ်စာအကုန်ကြိုက်သဗျ.. ဒီရှမ်းမုန့်တီကတော့ အစ်ကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ကျွေးရင် ပိုစားကောင်းမလားလို့..အဟ..
ကလောမှာတော့ မတွေ့မိဘူး တောင်ကြီးမှာမှ ရနိုင်တယ်လား။ စားကြည့်ချင်တယ်။
ခရီးကအပြန် အမောတကောနဲ့ ရောက်လာပါတယ်။ နောက်ကျသွားပြီလား .. ကျန်သေးလား အဟဲ
သရေယိုဖို့ ပုံလေးပါ တင်ပေးရင်ပိုကောင်းမယ်
ဟယ် စားချင်လိုက်တယ် ဘယ်မှာနေတာလဲဟင်?
အဟမ်း ဇုံလောက်တော့ ပျင်းတာပေါ့ရှင်
ငါးမွေးတဲ့ အင်တုံ သိတယ်ဟုတ် အဲ့ဒါနဲ့ ကိုစားပြစ်မယ်
ရှမ်းမုန့်တီစားဖူးတယ်၊ ကိုဝင်းဇော်ပြော သလိုပဲ နောက်တစ်ပွဲထပ်ယူရင် ပေ့ါရွှတ်ရွှတ် စြဖ်သွားရော။
ပဲပုပ်နံ့၊ နံနံပင်နံ့နဲ့ သံပုရာသီးနံ့တွေ လှိုင်နေလို့ ရောက်လာတယ်။ ရှမ်းခေါက်ဆွဲဆိုင်များ ရောက်နေသလား အောင့်မေ့ရတယ်။